अध्याय ७७ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरा वचनहरूबारे अनिश्चित हुनु भनेको मेरा कार्यहरूलाई इन्कार गर्ने आचरणलाई पक्रिराख्नु बराबर हो। भनाइको अर्थ, मेरा वचनहरू मेरो पुत्रभित्रबाट प्रवाहित भएका छन्, तापनि तिमीहरू त्यसलाई कुनै महत्त्व दिँदैनौ। तिमीहरू कति खेलाँची गर्छौ! मेरो पुत्रबाट धेरै वचन प्रवाहित भएका छन्, तापनि तिमीहरू शङ्कालु र अनिश्चित नै रहन्छौ। तिमीहरू अन्धा हौ! मैले गरेको हरेक कुराको पछाडि रहेको उद्देश्यलाई तिमीहरूले बुझ्दैनौ। के मेरो पुत्रद्वारा मैले प्रकट गर्ने वचनहरू मेरा आफ्‍नै वचन होइनन् र? केही यस्ता कुराहरू छन्, जसलाई म प्रत्यक्ष रूपले उच्चारण गर्न चाहन्नँ त्यसैकारण म मेरो पुत्रद्वारा बोल्छु। तैपनि, मैले प्रत्यक्ष रूपले बोल्नुपर्छ भन्ने जोर दिएर किन तिमीहरू अति हास्यास्पद हुन्छौ? तिमीहरूले मलाई बुझ्दैनौ, अनि तिमीहरूसित मेरा कार्य र कर्महरूबारे शङ्काहरू हुन्छन्! मेरो हरेक चाल अनि मेरो हरेक कार्य र कर्म सही हुन्छ भनेर के मैले पहिल्यै भनेको छैन र? मानिसहरूले त्यसलाई छानबिन गर्न छोड्नैपर्छ। तेरा अशुद्ध हातहरू झिक्! म तँलाई केही कुरा भन्छु: मैले प्रयोग गर्ने सबै मानिस मैले संसार सृष्टि गर्नुअघि नै पूर्वनिर्धारित गरिएका हुन्, अनि तिनीहरूलाई आज मैले अनुमोदन गरेको हुँ। तिमीहरू निरन्तर म कस्तो व्यक्ति हुँ भनी छानबिन गर्ने अनि मेरा कार्यहरूलाई अध्ययन गर्ने जस्ता कुराहरूमा प्रयास गरिरहेका छौ। तिमीहरू सबैसित लेनदेन गर्ने मानसिकता छ। यदि फेरि यस्तो भयो भने, म तिमीहरूलाई निश्चय नै आफ्नो हातले प्रहार गर्नेछु। म यसो भन्‍न खोजिरहेको छु: मलाई शङ्का नगर, अनि मैले गरेका कुराहरूको विश्लेषण वा मनन नगर। त्यस्ता कुराहरूमा तिमीहरूले झन् दखल दिनु हुँदैन, किनकि यी मेरा प्रशासनिक आदेशहरूसित सम्बन्धित छन्। यो सानोतिनो विषय होइन!
मैले निर्देशन दिएका सबै कुरा गर्न तिमीहरूसित भएका सबै समय प्रयोग गर। म फेरि यो कुरा भन्छु, अनि एउटा चेतावनीको रूपमा भन्छु: विदेशीहरू चीनमा ओइरिन लागेका छन्। यो पूर्ण रूपले सत्य हो! धेरै मानिस यसबारे शङ्कालु छन् अनि निश्चित छैनन् भन्‍ने मलाई थाहा छ, त्यसैले म तिमीहरूलाई घरीघरी याद दिलाउँछु कि तिमीहरूले छिट्टै जीवनको वृद्धिलाई खोजी गर, अनि मेरो इच्छालाई सन्तुष्ट पार्न सक्‍ने बन। आजदेखि उता, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था झन् तनावग्रस्त हुनेछ, अनि थुप्रै देश भित्रबाटै धराशायी हुन थाल्नेछन्। चीनमा खुसीका दिनहरू अन्त्य हुन लागेका छन्। यसको अर्थ, कामदारहरू हडतालमा जानेछन्, विद्यार्थीहरू आ-आफ्नो कक्षाबाट बाहिरिनेछन्, व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापार रोक्नेछन्, अनि कलकारखानाहरू सबै बन्द हुनेछन् र सञ्चालन हुन सक्नेछैनन्। ती कार्यकर्ताहरूले उम्किनको निम्ति कोष तयार गर्न थाल्नेछन् (यसले पनि मेरो व्यवस्थापनको योजनालाई पूरा गर्नेछ) अनि केन्द्रीय सरकारका सबै तहका नेताहरूले तयारी गर्ने क्रममा अरू कुरालाई बेवास्ता गरी निश्चित कुराहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न तिनीहरू अति व्यस्त रहनेछन् (यो अर्को कदम पूरा गर्नको निम्ति हो)। राम्रोसित दृष्टि लगाऊ! यो समस्त ब्रम्हाण्डलाई नै समेट्ने कुरा हो, चीनलाई मात्र होइन, किनकि मेरो काम पूरै विश्‍वप्रति लक्षित छ। तथापि, यसले मानिसहरूको समूह, अर्थात् मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूबाट राजाहरू बनाउने काम पनि पूरा गर्छ। के तँ यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्छस्? छिटो गर् र खोजी गर्! म तिमीहरूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्नेछैनँ; म तिमीहरूलाई तिमीहरूको हृदय सन्तुष्ट हुने गरी आनन्द अनुभव गर्न दिनेछु।
मेरा कार्यहरू उदेकका छन्। संसारमा ठूला विपत्तिहरू देखा पर्दा, अनि सबै दुष्कर्मी र शासकहरूले दण्ड पाउँदै गर्दा—अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा, मेरो नाउँभन्दा बाहिर रहेर दुष्कर्मीहरूले कष्ट भोग्द—म तिमीहरूलाई मेरा आशिषहरू प्रदान गर्न सुरु गर्नेछु। “तिमीहरूले निश्चय नै विपत्तिहरूको पीडा र हानि भोग्नेछैनौ” भनेर मैले विगतमा बारम्बार भनेका यी वचनहरूको मूलभूत अर्थ यही हो। के तिमीहरू यसलाई बुझ्न सक्छौ? मैले भनेको “यो समय” ले मेरा वचनहरू मेरो मुखबाट बाहिर निस्कने समयलाई जनाउँछ। पवित्र आत्माको काम निकै तीव्र गतिमा हुन्छ; म एक मिनेट वा एक सेकेण्ड पनि ढिलाइ गर्नेछैनँ वा खेर फाल्‍नेछैनँ। बरु, मेरा वचनहरू बोलिएकै क्षणमा म त्यसअनुरूप काम गर्नेछु। यदि मैले आज कसैलाई हटाउँदैछु वा म कसैलाई घृणा गर्छु भनेर भनेँ भने, यो त्यस व्यक्तिको लागि तुरुन्तै पूरा हुन्छ। अर्को शब्दमा, मेरा पवित्र आत्मा तिनीहरूबाट तुरुन्तै फर्काइन्छ, अनि तिनीहरू पूरै काम नलाग्ने जिउँदा लास हुनेछन्। त्यस्ता मानिसहरू अझै पनि सास फेरिरहेका, हिँडिरहेका अनि कुरा गरिरहेका हुन सक्लान्, अनि तिनीहरूले मेरो सामु अझै पनि प्रार्थना गर्लान्, तर मैले तिनीहरूलाई छोडिसकेको छु भनी तिनीहरूले कहिल्यै महसुस गर्नेछैनन्। तिनीहरू सबैभन्दा बेकम्‍मा मानिस हुनेछन्। यो पूर्ण रूपले सत्य र साँचो कुरा हो!
मेरा वचनहरूले मेरो मनुष्यत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यसलाई याद गर! शङ्का नगर; तिमीहरू पूर्ण रूपले निश्चित हुनैपर्छ। यो, जीवन र मृत्युको विषय हो! यो, अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो! मेरा वचनहरू बोलिएकै क्षणमा, मैले गर्न चाहेको कुरा तुरुन्तै पूरा भइसकेको हुन्छ। यी सबै वचन मेरो पुत्रद्वारा बोलिनैपर्छ। तिमीहरूमध्ये कसले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिएको छ? अरू कसरी म यसलाई बयान गर्न सक्छु? हर समय अति भयभीत हुन र कायर हुन छोडिदेऊ। के मलाई मानिसहरूका भावनाको कुनै वास्ता छैन? के मैले स्वीकृत गरेका मानिसहरूलाई म त्यत्तिकै बहिष्कार गर्नेछु र? म जे छु, त्यो सिद्धान्तसम्मत् हुन्छ। म आफैले स्थापित गरेको करारलाई म तोड्नेछैनँ, न त म मेरो आफ्नो योजनालाई बिथोल्‍नेछु। म तिमीहरूजस्तो मूर्ख छैनँ। मेरो काम महान् कुरा हो; यो कुनै मानिसले सम्पन्न गर्न नसक्‍ने कुरा हो। मैले भनेको छु कि म धर्मी छु अनि मलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूको निम्ति म प्रेम हुँ। के तँ यो साँचो हो भनी विश्‍वास गर्छस्? तँसित आशङ्काहरू निरन्तर हुन्छन्! यदि तँसित सबै कुराबारे शुद्ध विवेक छ भने, तँ किन अझै यति धेरै डराउँछस्? तैँले आफैलाई बाँधेको हुनाले नै यी सबै भएका हुन्। मेरो छोरा! मैले धेरै पल्ट तँलाई दुःखी नहुनू वा आँशु नझार्नू अनि म तँलाई अफाल्नेछैनँ भनी सम्झाएको छु। के तँ मलाई अझै भरोसा गर्न सक्दैनस्? म तँलाई थाम्नेछु अनि जान दिनेछैनँ; मेरो प्रेममा म तँलाई सधैँ अँगाल्नेछु। म तँलाई हेरचाह गर्नेछु, रक्षा गर्नेछु, अनि हरेक कुरामा म तँलाई प्रकाश र अन्तर्दृष्टिहरू दिनेछु ताकि तैँले म तेरा पिता हुँ, र तँलाई साथ दिने म नै हुँ भनेर देख्न सकोस्। तेरा पिताको काँधमा भएको बोझलाई कसरी हल्का पार्ने भनेर तँ सधैँ सोचिरहेको हुन्छस् भन्‍ने मलाई थाहा छ। मैले तँलाई दिएको बोझ यही नै हो। यसलाई पन्साउने कोसिस नगर्! कति मानिसहरू यी दिनमा मप्रति वफादार हुन सक्छन्? मलाई आशा छ, कि तैँले आफ्नो तालीमको गति बढाउन सक्छस् र चाँडै वृद्धि भएर मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छस्। पिताले पुत्रको निम्ति दिन-रात मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यसैले, पुत्रले पनि हरेक क्षण अनि हर सेकेण्ड पिताको व्यवस्थापन योजनालाई विचार गर्नुपर्छ। मैले भन्ने गरेको मसितको सक्रिय सहकार्य यही हो।
सबै मेरा कार्य हुन्। म आज मैले प्रयोग गर्ने मानिसहरूमाथि बोझ राखिदिनेछु अनि तिनीहरूलाई बुद्धि दिनेछु, ताकि तिनीहरूका सबै कार्य मेरो इच्छाअनुरूप हुन सकून्, ताकि मेरो राज्य साकार हुन सकोस्, अनि ताकि नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी उत्पन्न होऊन्। मैले प्रयोग नगरिरहेका मानिसहरू पूर्ण रूपले विपरीत छन्; तिनीहरू सधैँ बेहोस अवस्थामा हुन्छन्, तिनीहरू खाएपछि सुत्छन्, अनि तिनीहरू सुतेर उठेपछि खान्छन्, अनि बोझ भनेको के हो त्यसबारे तिनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यस्ता मानिसहरूमा पवित्र आत्माको कामको कमी हुन्छ, अनि मेरो मण्डलीबाट तिनीहरूलाई जति सक्दो चाँडो हटाउनुपर्छ। अब, म दर्शनहरूसित सम्बन्धित केही विषय बताउनेछु: मण्डली राज्यको निम्ति पूर्वसर्त हो; मण्डलीको निर्माण केही हदसम्‍म गरिएपछि मात्रै मानिसहरू राज्यभित्र प्रवेश गर्न सक्छन्। कोही पनि राज्यभित्र प्रत्यक्ष रूपले प्रवेश गर्न सक्दैन (यदि मद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको छैन भने)। मण्डली पहिलो कदम हो, तर राज्य नै मेरो व्यवस्थापन योजनाको लक्ष्य हो। मानिसहरू राज्यभित्र प्रवेश गरेपछि सबै कुराले निश्चित रूप धारण गर्नेछन्, अनि डराउनुपर्ने कुनै पनि कुरा हुनेछैन। वर्तमानमा, म र मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूमात्र राज्यभित्र प्रवेश गरेका छौँ अनि सबै जाति र मानिसलाई शासन गर्न थालेका छौँ। भनाइको अर्थ, मेरो राज्य सङ्गठित हुन सुरु हुँदैछ, अनि राजा वा मेरा मानिस हुनेहरूलाई सार्वजनिक रूपले घोषणा गरिएका छन्। तिमीहरूलाई भविष्यका घटनाहरूबारे चरणबद्ध रूपमा र क्रमिक रूपले बताइनेछ; अत्यधिक व्याकुल वा चिन्तित नहोऊ। के मैले तँलाई भनेको हरेक वचन याद छ? यदि तँ साँच्चै मेरो निम्ति नै होस् भने, म तँसँग साँचो रीतिले बोल्नेछु। छल र कुटिलता अभ्यास गर्नेहरूलाई चाहिँ म उदासीनतापूर्वक व्यवहार गर्छु अनि त्यस्तो व्यवहारले कसमाथि बरबादी ल्याउने रहेछ भनी तिनीहरूलाई स्पष्ट रूपले देखाउनेछु।
अघिल्लो: अध्याय ७६
अर्को: अध्याय ७८